शीर्ष १० ग्रीक अनलाइन क्यासिनो साइटहरु कुनै जम्मा बोनस छैन
ग्रीक राष्ट्रसँग गर्व गर्न थुप्रै कुरा छन्। सबै भन्दा पुरानो सभ्यता मध्ये एक भएकोले, यो सहस्राब्दी पुरानो इतिहासको कुनाबाट बाहिर पछाडि फर्किरहेको छ जब तपाईं यसको कुनै पनि सुन्दर शहरहरूको वरिपरि घुम्नुहुन्छ। जबकि यसको मूल समुद्र तटहरू, क्रिस्टल-सफा पानी, र स्वादिष्ट भूमध्य खाना यसको निर्विवाद मुख्य बिक्री बिन्दु हुन्, आगन्तुकहरू र त्यसका लागि स्थानीयहरू - यो कुरा थाहा पाउनुपर्दछ कि जुवा यति नै प्रख्यात छ, अरू सबै जस्तो।
वास्तवमा यो विश्वास गरिन्छ कि ग्रीसका देवताहरु आफैं पनि बेलाबेलामा ब्रह्माण्ड बाँडफाँड गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन्। ग्रीसमा जूवा खेल्नेलाई यसका सबै रूपहरूमा कानुनी ठानिनु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। निम्न समीक्षामा हामी तपाईंलाई हाम्रो राम्ररी अनुसन्धान गरिएको रैंकिंगको साथ प्रस्तुत गर्नेछौं जसमा धेरै शीर्ष अनलाइन क्यासिनो ग्रीस प्रशंसकहरू जुवा खेल्न सक्छन्, साथै केही अन्य योग्य दावेदारहरू पनि समावेश गर्दछन्।
शीर्ष १० ग्रीस अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
शीर्ष १० ग्रीक अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
ग्रीस मा अनलाइन जुवा कानून
ग्रीसको अनलाइन जुवा उदारीकरण गर्ने योजना छ।
ग्रीस यूरोपको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित छ र यसलाई आधिकारिक रूपमा हेलानिक गणतन्त्र भनिन्छ। त्यहाँ लगभग ११ करोड जनसंख्या छ, लगभग 11 million मिलियन देशको राजधानी एथेन्स मा अवस्थित संग। ग्रीस संयुक्त राष्ट्र संघका संस्थापक सदस्यका साथै युरोपियन युनियनको सदस्य पनि हो।
ग्रीसमा जग्गा-आधारित जुवा कानुनी हो, यदि यो क्यासिनो खाली स्थानहरूमा सञ्चालन हुन्छ, सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा होइन। त्यहाँ लगभग नौ भूमि-आधारित क्यासिनोहरू छन् र यी शाही डिक्री २ / / १ 29 1971१, कानून २२०2206 / १ 1994 4002,, र कानून 2011००२/२०११ द्वारा विनियमित छन्। लटरीहरू र खेल सट्टेबाजी ओपिएप द्वारा संचालित हुन्छ - २०२० सम्म।
ग्रीसमा अनलाइन जुवा एक फरक कथा हो जुन यस मुद्दाको साथ केही समयको लागि विवादको लागि खडा भएको छ। गत १० बर्षमा ग्रीसमा धेरै पटक ईयु कानूनको उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको थियो जुन सञ्चालनमा रहेका अनलाईन जुवा साइटहरूको संख्यामा रहेको थियो। यद्यपि यसको समाधान भइसकेको छ, युनानी सरकारले अनलाइन जुवा नियमित गर्ने घोषणा गर्यो र जनवरी २०१ January मा भनियो कि यसले अनलाइन जुवा इजाजतपत्र जारी गर्ने छ। २०१ of को रूपमा, यो अझै पनी आएको छैन र ओप्यापसँग अझै अनलाइन जुवामा नियन्त्रण छ। कहिलेकाँही विदेशी अनलाइन क्यासिनोहरू ओप्यापीले रोकेका छन्, तर अनलाइन जुवा उदारीकरण भएको घोषणा भएपछि केही साइटहरूले ग्रीसका खेलाडीहरू स्वीकार्न थालेका छन्।
यसको मतलव तपाई सुरक्षित अफशोर अनलाइन क्यासिनोमा सुरक्षित रूपमा जुवा खेल्न सक्नुहुनेछ, र ग्रीसमा हिउँदको बेला भित्र न्यानो र मनोरन्जन गर्न सक्नुहुन्छ।
ग्रीक खेलाडीहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो EUR अनलाइन कासिनियो
हाम्रा केही सिफारिश गरिएका अनलाइन क्यासिनोहरूले अझै पनि ग्रीक खेलाडीहरूलाई स्वीकार गर्दैनन्, तर अन्तमा यदि ग्रीस उनीहरूको अनलाइन जुवा उदारीकरण योजनाहरूको अघि बढ्छ भने। तर तिनीहरू मध्ये धेरै जना गर्छन र EUR मा खेल्नको लागि तपाईं क्यासिनो खेलहरूको विशाल श्रृंखला भेट्टाउन सक्नुहुन्छ।
G'day: यो ग्रीस मा धेरै चिसो हुन्छ जब जाडो को आसपास आउँछ, त्यसैले गोलार्ध को अर्को तर्फ को यात्रा तपाईं न्यानो हुनेछ। तपाईंको पैसा बचत गर्नुहोस् र तपाईंको मनोरन्जन राख्नुहोस् G'day अनलाइन क्यासिनोमा मुनि मुनि जाँदा। नेट मनोरन्जन र एजुगी द्वारा एक लाइभ डीलर सूची छ, जहाँ तपाईं लाइभ पाउनुहुनेछ ब्लेक, लाइभ रूले र बाँच्न Baccarat तपाईंको घरको आरामबाट खेल्न।
ज्याक हाउस: यो अनलाइन क्यासिनो ग्रीक खेलाडीहरूको लागि आदर्श हो, किनकि यूरोमा खेल्नेहरूले सबैलाई फाइदा पुग्छ किनभने सबै नियम र सर्तहरू मुद्रामा रेखांकित हुन्छन्। प्रत्येक पदोन्नतीका लागि यि पढ्न नबिर्सिनुहोला - त्यहाँ स्वागत बोनस, दैनिक निःशुल्क स्पिन, र अधिक सहित पर्याप्त छ। निर्दिष्ट स्लटहरूको लागि निःशुल्क स्पिनहरूको लागि अप्ट इन गर्नुहोस् किनकि त्यहाँ कुनै ब्याजेरिंग आवश्यकताहरू संलग्न छैनन्।
ग्रीस मा जुवा कानूनी छ?
पहिले, हामीले बिचको भिन्नता छुट्याउनु पर्छ:
ग्रीसमा ईंट र मोर्टार क्यासिनोहरू
ग्रीस मा अनलाइन क्यासिनो
युरोपियन विधायकहरूले जुवाको यी दुई बिभिन्न पक्षहरूलाई बिभिन्न तरीकाले नियमित गर्छन् र ग्रीसले नियमलाई अपवाद गर्दैन।
मानौं तपाईं ग्रीसमा बस्नुहुन्छ (वा तपाईं गर्मीका लागि यस सुन्दर भूमध्य देशतर्फ अघि बढ्नु भएको छ) र हामी पहिले विकल्प हेरौं।
ग्रीस मा भूमि आधारित जुवा
मलाई राम्रो समाचारको वाहक हुन दिनुहोस्: ग्रीसमा भूमिमा आधारित जुवा कानूनी हो र तपाईंसँग देशमा क्यासिनो खेलहरूको मजा लिन धेरै विकल्पहरू छन्।
यदि तपाईं ग्रीसको राजधानी, गौरवशाली एथेन्समा हुनुहुन्छ भने, मेरो सल्लाह तपाईंलाई एथेन्सको मोन्ट पर्नास रीजेन्सी क्यासिनोमा जानुहोस् र त्यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्।
१ 1960 s० को दशकमा खोलिएको यस प्रतिष्ठानलाई युरोपमा केहि राम्रा खेलहरू र कार्यहरूको घर भनेर चिनिन्छ र त्यहाँ सधैं केहि चलिरहेको हुन्छ।
साथै, यदि तपाईं पर्यटक हुनुहुन्छ भने, यो तपाईंको लागि अवलोभन स्थान हो। एक जुवाको लागि त्यहाँ जानुहोस् र आश्चर्यजनक १०1055 क्याफे रेस्टोरेन्टको लागि केहि समय छुट्याउन निश्चित गर्नुहोस्। १,०1,055 मिटरको उचाईमा अवस्थित यसले एटिका बेसिनको उत्तम दृश्य प्रस्तुत गर्दछ।
ग्रीसमा अनलाइन क्यासिनो भुक्तान विधि
त्यहाँ धेरै भुक्तानी विधिहरू छन् जम्मा र जीत फिर्ता लिन। अवश्य पनि, तिनीहरू सबै पारदर्शी र भरपर्दो छन्। तदनुसार, भिसा र मास्टरकार्डको क्रेडिट र डेबिट कार्डहरू प्राय: स्वीकार गरिन्छ। तर त्यहाँ विकल्पहरू पनि छन् जुन सुरक्षित र कार्यक्षम छन्। यसले Skrill, Neteller, PaySafeCard वा Viva Wallet समावेश गर्दछ। अधिक जानकारी को लागी, अनलाइन क्यासिनो समीक्षा निर्देशिका बाट परामर्श गर्नुहोस्।
ग्रीस युरोजोनको हो, जसको अर्थ ग्रीक जुवा खेलाडीहरूले यस तथ्यबाट फाइदा लिन सक्दछन् कि त्यहाँ धेरै अनलाइन क्यासिनो साइटहरू छन् EUR लाई। नतिजाको रूपमा, तिनीहरूलाई क्यासिनो खेलहरू खेल्दा कुनै पनि रूपान्तरण शुल्क तिर्नबाट छुट दिइन्छ।
शीर्ष १० ग्रीक अनलाइन क्यासिनो साइटहरू अपडेट गरिएको: जुन 1, 2020 लेखक: Damon
1 शीर्ष १० ग्रीस अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
1.1 शीर्ष १० ग्रीक अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
2 ग्रीस मा अनलाइन जुवा कानून
3 ग्रीक खेलाडीहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो EUR अनलाइन कासिनियो
4 ग्रीस मा जुवा कानूनी छ?
5 ग्रीस मा भूमि आधारित जुवा
6 ग्रीसमा अनलाइन क्यासिनो भुक्तान विधि
थन्डरबोल्ट क्यासिनो कुनै जम्मा बोनस कोडहरू 2020 छैनन्
शीर्ष १० ग्रीक अनलाइन ...